Fiarovana tambavy :: Vondrona loholona niantso firaisankina amin’ny fampiasana ny CVO • AoRaha
Fiarovana tambavy Vondrona loholona niantso firaisankina amin’ny fampiasana ny CVO
Nidera ny fihetsika nasehon’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny fiarovany ny tambavy CovidOrganics na CVO nandritra ny fandaharana manokana tao amin’ny haino aman-jery France-24 sy ny RFI, tamin’ny alatsinainy asa teo, ny loholona am-polony nanao fanambaràna, tetsy tamin’ny Motel Anosy, omaly. Fotoana hiraisan’ ny Malagasy rehetra hina amin’izay lalana nosafidian’ny Filoha izao, araka ny antso nataon’izy ireo.
« Mandalo fotoan-tsarotra isika ka miantso ny Malagasy rehetra izahay mba hiray fo sy hiray saina amin’ny ady amin’ny valanaretina voronavirus. Avalony ny ady lahy politika. Aoka isika tsy hanaiky ho voazarazan’ny hevitra tsy mitovy », hoy ny loholona Rabeony Day, raha namaky ny fanambaran’ireo loholona miisa dimy ambin’ny folo teny antoerana.
Nohazavan’ity vondrona loholona ity fa ao anatin’ny vanim-potoana mavaivay iatrehana tsindry ataon’ireo firenen-dehibe ny Kaontinanta Afrikana manoloana ny ady amin’ny valanaretina coronavirus. « Ilaina ny firaisankinan’ny Malagasy satria i Madagasikara no mitarika, ankehitriny. Araho daholo ireo fepetra napetraky ny fitondrana mba hahafahantsika miala haingana ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao ary hanampiantsika an’ireo firenenkafa », hoy indray ny loholona Kolo Roger.
Fenoarivo Atsinanana :: Lehilahy enjehina noho ny fanozonana ny Filoham-pirenena
Fitsaboana coronavirus :: Firenena afrikana faha-18 nisitraka ny CVO i Kaomôro